अभि सुवेदी - कान्तिपुर समाचार
अभि सुवेदीका लेखहरु :
भोजपुरको धूलोमा शब्दको इन्द्रेणी
कवि विप्लव ढकाल बिहानै एउटा मोटो किताब लिएर मेरो आँगनमा आइपुगे । तिनले हातमा बोकेको बृहत् ग्रन्थको रहस्य नखुलिन्जेल मैले अनेकौं कल्पना गरें । ‘भोजपुरको वाङ्मय’ भन्ने शीर्षक देखें । अनि सोचें, त्यो बृहत् ग्रन्थ एक जिल्ला परिचय होला । पछि थाहा भयो ८०६ पृष्ठको त्यो बृहत् ग्रन्थ विप्लवको दशकौं लामो एकल अध्ययन र अनुसन्धानको परिणाम रहेछ ।
माया मण्डलमा मृत्यु
अहिलेको जगतमा मृत्युको विषयमा केही लेख्नु लगभग असम्भव र विसंगत विषय हुन सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि यो मृत्यु–निबन्ध लेख्ने संजोग परेको छ । तर, मृत्युको यो विडम्बनाको कालमा यसमाथि लेख्नुपर्ने कारणमध्ये सबैभन्दा प्रमुख हो मानिसको जीवनमा मृत्यु होइन, मृत्यु जित्ने उसको काल्पनिकी र सिर्जनाको सामर्थ्य बलियो र अविजेय छ भनेर केही कुरा राख्नु ।
गोगोलको भूमिमा पुटिनको ट्याङ्क
अहिले केही समयदेखि युक्रेन राज्यमाथि शक्तिशाली रूस राज्यको भयानक हमला जारी छ । हमलाको उद्देश्य हो– त्यो ऐतिहासिक, सुन्दर, स्वतन्त्र, प्रजातान्त्रिक र विशाल राज्यलाई भूगोलबाटै मेटाइदिनु । त्यही भनिएको थियो सुरुमै । त्यसमा कुनै भ्रम रहेन । अहिले जगत्‌मा अरू विषय गौण भएका छन् ।
अदालतमा रङ्गमञ्च शक्ति
फाल्गुन १४, २०७८
रङ्गमञ्चसँग जोडिएको एक मानिस भएकाले मलाई थिएटरबाहिर अनेकौं ठाउँ र अवसरमा हुने तमासा र खेलले आकर्षित गरिबस्छन् । यसका कारण पनि रङ्गमञ्चीय प्रकृतिका नै छन् ।
गुरुकुलसँगै ब्युँझेका स्मृति
थापागाउँस्थित कुञ्ज नाटकघरमा ३० पुस २०७८ मा ‘पुतलीको घर’ मञ्चन गरी गुरुकुल निकै वर्षपछि फेरि आयो । यो नर्वेली नाटककार हेन्रिक इब्सेन (१८२८–१९०६) ले लेखेको र अंग्रेजीमा ‘अ डल्स हाउस’ भएर सन् १८७९ मा प्रकाशित नाटक हो । यसलाई सुनील पोखरेलले नेपालीमा ‘पुतलीको घर’ (२०६३) शीर्षकमा रूपान्तरण गरेर गुरुकुलबाट छापेका हुन् । दक्षिण एसियामा उन्नाइसौं शताब्दीको यो युरोपेली नाटकलाई कालिक उद्बोधनका रूपमा प्रयोग गरियो । यस्तो चेतनाको पहिलो केन्द्र थियो– बंगाल ।
मलाई भर्खरै एकैसाथ दुईवटा संकथन प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो । पहिलो थियो, शंकर लामिछानेलाई म अहिलेको लेखनको परिस्थितिमा कसरी सम्झिन्छु ? दोस्रो थियो, लामो लकडाउनकालमा मैले के समालोचना लेखें ? संकथन लामै थिए, तर यहाँ शंकर लामिछानेको संकट सिद्धान्तलाई मात्र संक्षेपमा लेख्न चाहन्छु । लकडाउनमा मैले लेखेको समालोचनाबारे उल्लेख मात्र गरेको छु ।
अफगानिस्तानको संकटले सवैका मनमा तरङ्ग जन्माएका छन् । उत्तरभन्दा प्रश्न धेरै उठ्ने रहेछन्, यस्तो किसिमको अकस्मात् परिवर्तनमा । मेरो मनमा पनि अनेकौं प्रश्न उठेका छन् । ती राजनैतिकभन्दा साहित्यिक प्रकृतिका छन् । आफूले सम्झिने न अफगानी राजनेता हुन्, न पत्रकार र सरकारी मानिस । ती हुन् साहित्यिकार, जोसँग यस्तै संगमहरूमा भेट गरियो । कविताको गोधूलिमा भावना, पीडा र आह्लाद बुझ्ने प्रयास गरियो । तिनका विषयलाई लिएर अफगानिस्तानको अहिलेको स्थितिमाथि कल्पना गर्ने जमर्को हो यो लेख ।